Zvemagariro Media uye Objection Management | Martech Zone
Yemagariro Midhiya uye Objection Management
Chipiri, Kurume 2, 2010 Mugovera, Mbudzi 28, 2015 Douglas Karr
Mangwanani ano ndanga ndichiverenga chena chena pepa yakawanikwa kuburikidza saiti yaAprimo, pa kusanganisa vezvenhau.
Vashambadziri havafanirwe kutanga kubva pakutanga kuti vavake magariro enhau-mutambo unoshandura kugona mune iripo nhaurirano musanganiswa. Nekurapa vezvenhau sekuwedzera kwenhau nyowani neWebhu 1.0, vashambadzi vari kushandisa kwazviri kugona kwavo mukati mevanowanikwa bandwidth uye zviwanikwa.
Muchena anotaura kune iyo mabasa ekutengesa uye kushambadzira kuchinge kwadzoserwa. Vatengesi - avo kazhinji vasina kumbobvira vaonana neruzhinji - vava kudiwa kuti vataure uye vagadzirise iyo brand pachena. Ivo vari kuzadzisa izvi vasina kudzidziswa chero mukati kuramba kupokana. Ini ndakakurukura izvi zvakare mune yangu mharidzo kuWebtrends Shingairira.
Panguva imwecheteyo, yedu vatengesi vanotarisirwa kutora zvinzvimbo muSocial Media, kushandisa imwe-kune-yakawanda kushambadzira uye nzira dzekutaurirana dzavasina kumbobvira vakwanisa.
Muchena anopa mazano mana:
Gadzira nzvimbo yekutarisa nekuisa mumwe munhu kubva kuvashandi vekutengesa kuti atarisire vezvenhau. Uyu munhu anofanirwa kuve nebasa rekugadzira kushambadzira's social-media strategy, kusanganisira kugadzirwa kwechirongwa chinoisa miganho pamusoro pedzinoshandiswa mota, nzira dzichafambiswa, uye vanhu vapi vanofanirwa kupihwa zvinoenderana nemutemo wekambani.
Shandira pamwe nemamwe mabasa iyo inotora chikamu mukutenga kukuru, kusanganisira basa revatengi uye manejimendi manejimendi. Na2010, anopfuura makumi matanhatu muzana emakambani eFortune 60 ane webhusaiti achave neimwe nzira yenharaunda yepamhepo inogona kushandiswa kune chinangwa chehukama hwevatengi. Nekudaro, zvakakosha kuti kushambadzira kunzwisise chinzvimbo chemagariro enhau mukutengesa zviitiko kubva kune izvo zviri postsales revatengi zvinoitirwa kuona kuti muridzi akagoverwa zvakafanira pamabasa akasiyana siyana anotora chikamu mukuitwa kwesimba rakakura reCRM zano.
Tora vanhu kubva kuvashandi veshambadziro kuti vadzidzise zvekutengesa, kunyanya avo vanoita mumaforamu emagariro ayo anogonesa kutaurirana-kune-mumwe. Vashambadziri vasina rovedzo kana ruzivo mu "kuramba manejimendi" vanonyanya kutambura munyika yemagariro nhepfenyuro, nekuti vatengi vanoshora vakasununguka mupi nezvigadzirwa zvacho mumaforamu eruzhinji.
Ita sekuenda-pakati nevatungamiriri vekutengesa nevatengesi vanoshuvira kutora chikamu munhau dzemagariro, kunyanya nzvimbo dzavanotaurirana-kune-vazhinji, uye vodzidziswa nehutungamiriri hwakafanana hunopihwa kune vekutengesa nevezvekutaurirana kuti vave nechokwadi chekuchengetedzwa kwechiratidzo uye mameseji asingachinji.
Ini ndapa nzira yeku vatengesi kuti vatange kutora Social Media - asi iyo whitepaper inotsanangudza zvakawanda kubva kune yakazara yemakambani zano. Neniwo ndave kuenda kudzidziswa kwekutengesa pamusoro pegore rapfuura uye yaikurudzira zvikuru kune vese vatengesi! Ndiri kubvunzurudza Bill Godfrey, CEO we Aprimo nhasi, uye tichakurukura nezvezviitiko izvi - tsvaga vhidhiyo inouya!
Yakabatanidzwa yaAprimo, pane inodikanwa kushambadzira software inogonesa B2C uye B2B vashambadziri kuti vabudirire kufamba neshanduko inochinja yekushambadzira nekutora mabhajeti uye kushandisa, kubvisa masilos emukati nekufambiswa kwemabasa ekufambisa uye kuita mishandirapamwe yemigwagwa mizhinji yekufambisa yakayera ROI. kubva ku Aprimo Website.
Tags: kuramba kupokanakuramba kwekutengesaevanhu vezvenhaumanejimendi kupokana manejimendi
Maonero Akataurwa Impact yekutsvaga Injini
Yechokwadi-Nguva Kuburitsa uye Kutsvaga
Nhoroondo ye Deep Ripples Inc.
Mar 2, 2010 pa 10: 59 AM
Vezvenhau vezvemagariro zvechokwadi vari kukurumidzisa kufunga patsva kwe "madhipatimendi" sezvo mitsetse yese iri kudzima. Yakanakira bhizinesi.